Nanomboka ny beta fahefatra an'ny macOS 11.5, ny watchOS 7.6 ary ny tvOS 14.7 ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Navoaka koa ny kinova beta an'ny iOS 14.7, iPadOS 14.7 ho an'ny mpamorona. Amin'izay mba navoaka ny beta rehetra amin'ny kinova fahefatra nataon'i Apple ary ny mpamorona dia afaka mametraka azy ireo amin'ny fitaovany ankehitriny.
Amin'ity tranga ity dia afaka milaza isika fa misy ny mpampiasa miandry ny famahana ny kinova vaovao bateria na olana momba ny fahamarinan-toerana mihitsy azaAmin'ity tranga ity dia toa mifantoka amin'ny fanatsarana ireo lafiny ireo ny Apple. Efa eo am-pelatanan'izy ireo ny kinova beta vaovao hanamarinana raha nisy fanatsarana nampiharina tamin'ity lafiny ity.
Ora vitsy lasa izay taorian'ny nanombohany ary tsy fantatsika amin'izao fotoana izao fa misy fiovana miavaka amin'izy ireo amin'ny resaka fampiasa, raha misy zavatra miavaka hiseho dia hanavao ity lahatsoratra ity ihany izahay na hanoratra vaovao iray miaraka amin'ny vaovao. Tokony hotadidintsika fa ny kinova WatchOS dia tsy mamela fihenam-bidy raha toa ka hapetraka ary tsy maintsy atao ihany koa manana ny iPhone koa havaozina amin'ny kinova beta an'ny iOS miasa tsara ka aleo miala amin'ny beta ireo.
Tsaroantsika hatrany fa zava-dehibe ny "manalavitra" an'ireo kinova beta ireo ho an'ny mpamorona ary miandry raha toa ka misy ny famoahana kinova beta ampahibemaso na dia tsara kokoa aza ny faharetana ary miandry ny kinova farany hialana amin'ny olana. Ny marina dia mazàna ny kinova beta an'i Apple dia somary milamina ihany saingy betas izy ireo ary mety misy tsy fitoviana amin'ny fitaovana na fampiharana ampiasainay amin'ny asa ka noho izany tsy maintsy mitandrina isika amin'izay apetrantsika amin'ny fitaovantsika. Azo antoka fa havoaka anio ireo kinova beta ho an'ireo mpamorona macOS, hihaino tsara izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS 11.5, watchOS 7.6, ary ny tvOS 14.7 beta